Hahafantatra ny PLA 3D taratasy ara-nofo ny fitaovana - China Cixi Lanbo Pirinty natao
Fantaro ny zavatra PLA ny 3D fitaovana pirinty
Maro ny mpanjifa sy ny namany hanontany Ahy ianao raha PLA dia plastika? Ity misy marokoroko resaka mikasika ny zava-PLA ankehitriny.
PLA dia fanafohezana ny teny anglisy ny polylactic asidra, izay voasoratra toy ny: polylacticacid. Polylactic asidra (PLA) dia tantara biobased sy biodegradable fitaovana vita amin'ny akora hydroéthylamidon naroson'ny loharanon-karena azo havaozina fototra toy ny vary. Ny hydroéthylamidon fitaovana manta dia azo avy saccharification mba hahazoana gliokaozy, ary avy eo gliokaozy Ary nisy aretina dia masirasira mba hamokatra avo-fahadiovana lactic asidra, ary avy eo dia nisy lanjany molekiolan'ny polylactic asidra dia voafintina amin'ny simika sy voafintina. Misy biodegradability tsara. Rehefa ampiasaina, dia mety ho toy ny tsinontsinona tanteraka ny zavamiaina bitika dia bitika eo amin'ny natiora eo ambanin'ny toe-javatra sasany, ary farany mahatonga ny gazy karbonika sy rano, izay tsy mandoto ny tontolo iainana. Izany no tena mahasoa ny tontolo iainana, ary dia fantatra ho toy ny tontolo iainana ara-nofo.
Ny tatitra nanatsoaka hevitra fa ny vokatry ny firaka, volavelona, ​​cadmium, chrome, biphenyl, ary diphenyl Etera dia mifanaraka amin'ny 11 taona EU toromarika momba ny fampiasana ny akora voafetra, ary ny vokatry ny santionany 001 tsy hita. ND TSY dected.
Ny fanadihadiana dia nanambara fa ambony PLA dia zavatra tsara, fa ny fiarovana ny sakafo dia tena be resaka momba ny rehetra, na mitandrina.
Mamelà ahy ianareo hiresaka momba ny sasany miafina fahadisoana sy ny loza ateraky ny PLA. Voalohany indrindra, PLA dia tsy mahatohitra ny hafanana avo, ary manomboka mba hanaratsy ankapobeny manodidina ny 60 °. Amin'ny maha-sakafo lasitra, tsy maintsy ho tsaboina hatsiaka; PLA fitaovana dia afaka ho toy ny tsinontsinona, Izany Fanahy izany no tombony sy ny tombon-dahiny. Na dia tontolo iainana sariaka, mitaky fanaovana pirinty ny vokatra 3D-kilasy ny zavatra. Maharitra dia fohy birao; ao amin'ny fanontam-pirinty dingana, satria avo-hafanana mpandrendrika, dia hiaro ny poti, na ny poti tenany ihany, dia tsy misy poizina, fa izany no kely toy ny PM2.5, maharitra miaina na ny fahavoazana ho an'ny olombelona havokavoka, Noho izany, ny toerana fanaovana pirinty 3D dia ventilated kokoa.
Noho izany, PLA dia ny tontolo iainana ara-nofo sariaka ny olona rehetra afaka mampiasa amin-toky.
Kamo dumpling artifact
Farany nihiaka teny filamatra, ny teknolojia miova ny fiainana, 3D pirinty avy amin'ny nofy ny zava-misy!